Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhece ee JWXO – Dagaala Xoogan oo ka Socda Ogadenya oo Cadawga Lagu Naafeeyay
Xarunta Dhece ee JWXO – Dagaala Xoogan oo ka Socda Ogadenya oo Cadawga Lagu Naafeeyay
Wararka nagasoo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixiyay dagaallo meela kala duwan oo dalka ah ka dhacay. Dagaalada socda oo ah kuwii bisha barakaysan ee Ramadaanka ayaa cadawga lagu gaadhsiiya khasaare laxaadleh, oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalada Bisha ramadaan oo meela kala duwan oo Ogadenia ah ka socda ayay warbixintii ugu dambaysay een helnay aya ka warbiixisay dagaal xoogan oo ka dhacay degmada Dhanaan halkaasoo cadawga lagaga dilay ciidan kor udhaafaya 40 askari iyo dhaawac farabadan oy kala tageen goobta dagaalka.
11/7/14 Cadhoolle oo dagmada Iimaybari ee Gobolka Shabeelle katirsan dagaal aad ukulul oo CWXO iyo kuwa gumaysiga Ethiopia kudhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagugaadhsiiyay khasaare balaadhan oo aan faahfaahintiisa lahaynin.
15/7/14 Masaare oo Gobilka Doollo katirsan dagaal kadhacay waxaa cidanka saamalaluudka ah ee gumaysiga lagaga dilay 6 askari tiro aan laxaqiijinin na waa laga dhaawacay.
15/7/14 Baraajisaale oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
15/7/14 Day oo dagmada Iimaybari katirsan dagaal CWXO iyo kuwa cadawga ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan wali lasoo faahfaahinin.
15/7/14 Gabrooyin oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga ee daalan lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
21/7/14 dagmada Dhanaan oo Gobolka Shabeelle katirsan weerar aad uculus oo ay ciidanka xooga dalka Ogadenia kuqaadeen ciidanka gumaysiga ee sida sharci darada ah kujooga wadanka Ogadenia waxaa lagaga dilay inkabadan 40 askari halka dhaawacana aan wali laxaqiijinin.
21/7/14 Garaac oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintisa lahaynin,
22/7/14 Bardaaxle oo Dhagaxbuur katirsan weerar qorshaysan oo ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawgu leeyahay oo halkaas howlo dad dhibis ah ujoogay waxaa lagu baabi’iyay guud ahaan ciidankii wayaanaha waxaana laga dhigay mid bakhtiyay iyo dhaawacmay waxaana dhaawii lageeyay magaalada Jigjiga iyadoo sidoo kale oohinta ciidanka cadawga laga dareemay magaalada Dhagaxbuur.
23/7/14 Fariiqyada oo dagmada Baabili katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari tiro kalana waa lagaga dhaawacay.
23/7/14 Haadaanta oo dagmada Baabili ee Gobolka Faafan katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxay kugubeen 1 baabuur oo nooca ay ciidanka cadawgu qaataan ah waxaana kubasbeelay baabuurkii iyo wixii saaraaba.
24/7/14 Dulhowd oo dagmada Dhuxun ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
24/7/14 Ceelo’obo oo dagmada Galaalshe katirsan dagaal xoogan oo kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 12 askari 15 kalana waa lagu dhaawacay.